नुहाउने र शारीरिक कार्यहरूले उनीहरूको हेलोवीन लाइनअपको अनावरण गर्‍यो - आईहोरर
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	नुहाउने र शारीरिक कार्यहरूले उनीहरूको हेलोवीन लाइनअप खोल्यो
नुहाउने र शारीरिक कार्यहरूले उनीहरूको हेलोवीन लाइनअप खोल्यो
by ट्रे हिल्बर्न III जुलाई 27, 2020
by ट्रे हिल्बर्न III जुलाई 27, 2020 1,051 हेराइहरू
यो पछिल्लो हप्ता मात्र थियो लक्ष्य तिनीहरूको साइटमा तिनीहरूको हेलोवीन व्यापार बिक्री सुरु भयो। अब नुहाउने र शारीरिक कार्य गर्दछ सुगन्धित मौसमी उपहारको तिनीहरूको वर्गीकरण छोड्नुहोस्।
स्नान र शरीर स्ग्रहमा अपेक्षित मोमबत्तीहरू, लोशनहरू र हात सेनिटाइजरहरू समावेश छन्। तर त्यहाँ केहि रमाईलो फेला पर्दछ जस्तै रातको प्रकाश र अन्य आईटमहरू। हाम्रो मनपर्दो के हो भनेर भन्न गाह्रो छ किनकि हामी धेरै डराएको थिम भएको मोमबत्तीहरूको साथ अस्वस्थ छौं। तर, भ्याम्पायर रगत धेरै राम्रो देखिन्छ।
अगाडि उल्लेख गरिए अनुसार लक्ष्यले भर्खरै तिनीहरूको हेलोवीन वस्तुहरू पोष्ट गर्यो। ती पहिले नै बिक्री भइरहेको छ। धेरै अविश्वसनीय यदि तपाईं यो सोच्नुहुन्छ कि अक्टुबर अझै पनि केही टाढा टाढा छ। म स्पूकिनेसको लागि मायाको कदर गर्न सक्छु। मौसमी आईटमहरू को एक धेरै मेरो लागि वर्ष को बाँकी लागि अन्तिम। वास्तवमा, जब क्रिसमस वरिपरि आउँछ म प्राय: आफूलाई ती सजावटहरू हेलोवीन मुख्य आधारहरूमा मिलाउँदछु। अब यो स्नान र शरीर निर्माण संग्रहको साथ मेरो घर वर्षको बाँकीको लागि राम्रो र मौसमी गन्ध आउनेछ।
स्नान र शरीर निर्माण संग्रहबाट तपाईंको मनपर्ने आइटमहरू के के छन्? मध्यरात्री बू सिट्रस? उत्तम कद्दू? खुसी सताउन? हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा तपाइँको छनौटहरू थाहा दिनुहोस्।